Ụbọchị My Pet » Na Rebound – Ọ online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụzọ ziri ezi isi na-aga?
emelitere ikpeazụ: Aug. 09 2020 | < 1
Ọ bụrụ na ị na-adịbeghị anya na-arahụ site a gbasaa, bụ online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụzọ ziri ezi isi rebound? Malite ke akpa ụwa mgbe a mmekọrịta mgbe ụfọdụ adịghị mfe. Ịbụ na rebound bụ ike, ma ndị a Atụmatụ-ebe a ka ị nọgide na-adịghị ize ndụ!
M na-adịghị asị ịchụpụ ihe nile banyere gị n'oge gara aga mmekọrịta, ma tinye gị na online profaịlụ mmekọrịta gị n'oge gara aga. Ndị mmadụ chọrọ ịma ma ọ bụrụ na ị na-gbara alụkwaghịm, iche, nwụrụ wdg. Sị ihe dị ka, "Abụ m ọhụrụ na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụwa" bụ dịkwa mma iji mgbe ị na-ọhụrụ na ya. Onye ọ bụla dị ọhụrụ na otu oge!
Dị ka offline ụwa, na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụwa jupụtara cheaters, ụgha, wdg. Kpachara anya mgbe ị na-achọ na profaịlụ na-aza ozi. Malite na ịbụ na rebound pụrụ iduga gị ịghọ ngwangwa ọ bụla onye ga-enye gị anya. Nke a pụrụ iduga nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-adịghị anya.
Enyela niile ozi gị
E nwere ihe mere online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ na-a otutu ihe ndị zoro ezo. Owuwu ntụkwasị obi na onye na-ewe oge. Were oge iji mata mmadụ n'ihu ha maara nọmba ekwentị gị n'ihi na i nwere ike na-akwa ụta ya ka e mesịrị.
Ndi a Enyi Lee karịrị potentials
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ezie na onye, na na rebound, elele na ezigbo enyi ma ọ bụrụ na ị na-eme nhọrọ dị mma. Friends nwere ike ịbụ brutally n'eziokwu tupu ị na-eme nnukwu emehie.